Fa maninona no tsy mandeha ny mic Tonor-ko? - Faq
Tena > Faq > Ireo mpamily mikrô tonô - mamaly ireo fanontaniana
Ireo mpamily mikrô tonô - mamaly ireo fanontaniana
Fa maninona no tsy mandeha ny mic Tonor-ko?
Andramo nyLittleao amin'ny toerana vaovao misy anao aorian'ny fizahana scan matetika. Raha nyLittlemiasa, avy eo nyOLANAdia avy amin'ny tontolo iainana eo an-toerana amin'ny toeranao na tranobe misy anao. Raha nyLittlembola milatsaka ihany, mety manana lesoka ianaoLittlena mpandray - alefaso izy ireo hanompo.
Tongasoa eto amin'ny lahatsoratra androany dia hasehoko anao ny fomba fananganana mikrô ao amin'ny Windows 10, ny fomba fampidirana ilay mikrô, izay zavatra fanampiny mety ilainao hatao mba hametrahana azy tsara, ary hojerentsika ny sasany amin'ireto toe-javatra ireto dia azontsika atao ihany koa ny manova ny varavarankely ho an'ny microphone tsy mandeha araka ny tokony ho izy, raha vantany vao tafapetraka dia aza manahy fa rakotra sasany ny fanamboarana azo atao. Izaho koa dia manana lahatsoratra iray misaraka izay tokony hanampy raha tsy mandeha izy io, fa ho tonga any aoriana any izahay dia mety hanana microphone mifamatotra amin'ny tariby usb na tariby 3,5 milimetatra ny hany zavatra tokony hatao amin'io fotoana io. dia ny fampiasanao microphone mampiasa USB dia alao antoka fa tafiditra ao anaty port USB marina izy ary miverina avy amin'ny PC mandra-piasa tsara raha mampiasa tariby 3.5mm ianao hampifandray azy dia alao antoka fa ampidirinao ao anaty slot micro izany fa tsy ilay headphone slot.
Ny mikrôfona sasany dia mety mila famatsiana herinaratra avy any ivelany koa karohyo ny mikroponao anao manokana hahitanao raha toa ka aorian'ny fampidirana ilay mikrô. Hodinihin'ny mikrô izao fa eken'ny Windows izany. Azonao atao ihany koa ny mametraka azy ho toy ny mikrôfoninao default, raha tianao zahao fa eken'i Windows izy, tsindrio aloha ny tsindrio ny feo ao amin'ny fitoeram-bokatra ary avy eo safidio ny Open Sound setting ao anatin'ireo toe-peo ireo.
Kitiho ny Panel Control SoundLink manga hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Ity dia hanokatra ny Sound Control Panel ao anaty varavarankely vaovao Tsindrio ny vakizoro fandraisam-peo, izay tokony ho safidy faharoa hijerena ireo mikrô rehetra ao amin'ny solosainao, raha tsy hitanao ny mikrônanao amin'ity lisitra ity, tsindrio havanana ary safidio azo antoka Tafaraka ary jereo ireo fitaovana sembana, raha hitanao izao dia mety mila tsindrio havanana izy ary alefaso, raha mbola tsy ekena na tsy mandeha tsara ny mikroponao dia tsindrio ny sarintany eo amin'ny efijery mba hifindra amin'ny iray mankany amin'ny lahatsoratra hafa ny ahy izay manana vahaolana mety maro, ity lahatsoratra ity dia ho ao amin'ny famaritana ihany koa raha sendra olana maro ianao d mandritra ny fametrahana dia azonao atao ny misafidy ny mikrôfonao ary misafidy napetraka ho default eto ambany mba hahatonga ny mikroponao anao ho microphone default amin'ny PC-nao. Ny ampahany manaraka amin'ny fanomanana izay ho fonosinay dia ny fanamarinana raha manana mpamily fitaovana farany izahay.
Miankina amin'ny micro anao, azo apetraka amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra ny mpamily fa tokony ho fantatrao hoe aiza no ahazoana azy ireo na ao anaty boaty dia jereo ny tranokala, sao sanatria afaka mahazo Windows isika mba hahazo izay farany indrindra koa Mitady sy mametraka mpamily. ity, jereo ao amin'ny Device Manager ho an'ny faritra antsoina hoe Audio Inputs and Outputs. Tsindrio ny zana-tsipìka eo an-tampony hanitarana azy io ary tadiavo ny mikrôninao, kitiho indroa ny mikrônonao ary avy eo mankanesa any amin'ny kiheba Drivers, tsindrio izao ny Update Driver ary avy eo safidio ny safidy mandeha ho azy hamela an'i Windows hikaroka sy hametraka ireo fanavaozana ny mpamily, raha misy izany, azo sintonina avy amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra izay ahafahanao manova ny sasany amin'ireo toe-javatra. Misy toerana vitsivitsy azontsika ovaina ao amin'ny Windows hanamboarana ny mikrô izay ilainao raha tsindrio havanana ny kisary feo ao anaty fitoeram-pandrindrana ary sokafy ny fanamafisam-peo tsindrio ilay rohy Bluesound Control Panel eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery hanokatra ny varavarankely vaovao indray .
Mandehana any amin'ny vakizoro Record, fa amin'ity indray mitoraka ity, kitiho indroa ny mikrôoo ao amin'ny tabilao List, izay azonao atao ny mifidy ny maheno ilay feo noraketin'ny mikrôfônina, fa ny ankamaroanareo angamba mety te hiala an'io. Eto amin'ny takelaka 'Haavo' dia azonao atao ny manova ny fahatsapana ny mikrophone. Azonao atao ny manova ny fahatsapana ny mikrophone eo amin'ny slider ambony izay mety tianao hilalao, miankina amin'ny mikroponao anao sy ny fomba fampifandraisana azy koa.
Mety misy safidy fanentanana koa eto, raha tsy hitanao izany fa tsapanao fa mangina loatra ny mic anao dia tsindrio ny sarintany izao hijerena lahatsoratra iray ahy mampiseho aminao ny fomba hampiasana ny fanamafisam-peonao Mikrophone na dia tsy hitanao aza manana ny safidy, mila mijery ny tapany faharoa amin'ity lahatsoratra ity ianao hahitanao ny fomba marina. Mamela rohy mankany aminy ihany koa aho amin'ny famaritana. Ary farany, ny tabilao mandroso dia manana safidy maromaro hanovana, toy ny: B.
Ovao ny kalitaon'ny microphone. Mety misy takelaka hafa ihany koa, fa miankina amin'ny microphone anananao izany. Azonao atao koa ny manangana ny fankasitrahana ny kabary amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo fikirana mikrô ao amin'ny bara fitadiavana ary izany no fomba hananganana mikrôfôna vaovao ao Windows. 10 a, raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mandefa azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra ary hiezaka hamaly izany aho.
Manantena aho fa hitanao fa mahasoa ilay lahatsoratra raha mieritreritra ny hiala amin'izao fotoana izao ianao ary misalasala hisoratra anarana ary hahita anao amin'ny lahatsoratra hafa aho
Tsara ve ny microphone Tonor?
nyTONORAcondensermikrôdia aLEHIBEmpisolo toerana ambony hafamikrôizany dia tsy mora vidy satria ary amin'ny tranga maro dia afaka mahavita toy izany koa izyTSARAraha tsy tsara kokoa. ... Apetraho fotsiny nymikrôeo afovoan'ireo vahiny rehetra ary handray mora foana ny feon'ny tsirairay izany.
Ity ny mikrô Tonor BM-700 XLR. Na, araka ny voalaza ao amin'ny lisitr'i Amazon, ny TONOR XRL ka hatramin'ny 3.5mm podcasting studio fandraisam-peo mikraoba ho an'ny solosaina miaraka amina zana-bava mikraoba azo ovaina sy kitapo mikrôfôna. ... inona? Ary eny, tena milaza XRL fa tsy XLR.
Ankoatry ny tetika SEO mampiahiahy an'i Amazon dia tena mahafinaritra tokoa izany - amin'ny $ 32 fotsiny dia afaka mahazo izay rehetra ilainao ianao ho an'ny audio condenser mic audio ho an'ny YouTube sy streaming, podcasting sns. Raha tokony ho avy amin'ny mikrophone fotsiny, ilay boaty dia miaraka amina havoana manaitra (ny sofin'ireo mpihaino anao dia hisaotra anao), fitaratra ary fanasiana pop - aza mampiasa azy roa, na inona na inona hampiasana avy amin'ny sofina. mankasitraka ny mpihaino anao - ary misy sandry sy birao scissor hametrahana azy, miaraka amin'ny tariby XLR ka hatramin'ny 3.5mm mendrika raha tsy manana fametrahana XLR ianao, ary kara-peo USB 3.5mm - na izany aza - holazaiko ianao tsy tokony hampiasa an'io atsy ho atsy.
Raha ny lanja amin'ny vola, ity fonosana feno rehetra ity dia sarotra resena amin'ny $ 32 fotsiny. Marina fa tsy azonao ny singa avo lenta indrindra amin'izany vidiny izany - mora ny sandry sy ny fiakarana ary ho simba rehefa mandeha ny fotoana raha nitantana azy ireo loatra ianao ary nitazona mikraoba mavesatra raha te-hanavao ianao avy eo.
FA ampy tsara izy ireo hanombohana amin'ny feo. Mora tokoa ny manangana azy - hamafiso ny sisin'ny birao hatramin'ny sisin'ny latabatrao, ampidino ny sandry, ary hamafiso ny bokotra fanidiana, apetaho io, apetraho eo amin'ny kofehin-tànana ny tohotra, ary ampidiro ao amin'ny fantsom-baraka ny mikrô. Ampiasao avy eo ny sivana pop na fitaratra fitaratra tianao.
Mahazo valiny mitovy amin'izany ny sivana pop sy ny fitaratra-ahenao ny vokatry ny plosives - fa ny sivana pop kosa dia manana asa tsara kokoa. Na izany aza, mila habaka 2 santimetatra na mihoatra eo anelanelany sy ny mikrô izy, ary amin'ny ankapobeny ity fananganana ity dia mitaky habaka betsaka kokoa noho izay ihany koa. Tsara ihany koa ny manamarika fa ity dia mikrofona miatrika ny lafiny izay horaisina fotsiny avy amin'ny alohan'ilay marika tonor nongonina araka ny tokony ho izy fa tsy ny lamosina na ny tampon'ny kapsily. Safidinao ny mampifandray azy ireo mivantana amin'ny seranan-tsambo na mixer amin'ny alàlan'ny XLR, na amin'ny motherboard anao amin'ny alàlan'ny tariby XLR mankany 3.5mm.
Na izany aza, tsy misy ilàna azy mihitsy ny kara-peo USB. Notsapaiko tamin'ny birao 2 samihafa sy solosaina finday misy seranana USB 2.0 sy 3.0 ary ny azoko dia ity korontana tsy mitombina ity.
Toa tsara ny mikrô! Toa tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fananganana mety mifandraika amin'ny XLR, saingy azo ampiasaina tanteraka amin'ny alàlan'ny mpampitohy 3.5mm tafiditra ao anaty fampidirana mikrô ao amin'ny solo-sainanao. Ity misy santionany microphone tariby XLR 3.5mm tsy misy fanodinana feo, ary avy eo kopia haingana azy miaraka amina fanodinana am-peo mba hahitanao izay azo atao miaraka aminy: fitsapana mikrô miaraka amin'ny Tonor BM-700 ity izay manana XLR-amin'ny tariby 3.5mm dia ampidirina ao amin'ny jack mikrô mavokely amin'ny solosaina birao.
Fitsapana fitsapana ity. Fitsapana fitsapana 1-2-3. Salama daholo, ny anarako dia Adam na EposVox ary fitsapana mikrô ity. HELLO, tsy misy sivana pop na fitaratra an-drivotra intsony izao, satria te hanana mazava toy ny kristaly aho. kalitao araka izay azo atao, ary navelako izany.
Fa fitsapana mikrô ity. Manao ahoana daholo. Manao ahoana ianao? ? Fitsapana mikrô ity miaraka amin'ny Tonor BM-700 mifandray amin'ny jack mikrô mavokely amin'ny solosaina birao misy tariby XLR ka hatramin'ny 3.5mm.
Fitsapana io. Fitsapana io. Fitsapana fitsapana 1- 2-3. Salama daholo, ny anarako dia Adama na EposVox ary fitsapana mikrô ity. HELLO, tsy misy sivana pop na fitaratra an-tsary izao, satria nitady kalitao mazava toy ny kristaly aho, ary navelako fotsiny eo ambony.
Fa izany dia fitsapana mikrô. Salama daholo, manao ahoana izany? ary ity misy fitsapana mifandraika amin'ny rakipeo malalako amin'ny alàlan'ny XLR tsy misy fanodinana ampiharina: fanandramana mikrô ity amin'ny alàlan'ny microphone condenser Tonor BM-700, izay mifamatotra amin'ny talantalana fanodinam-peoko amin'ny alàlan'ny XLR tahaka ny ataoko amin'ny mikrophone mahazatra. Fitsapana mikrô ity.
Salama daholo, manao ahoana? Adam na EposVox no anarako ary mihaino fanandramana mikrô ianao mandritra ny fananganana studio mahazatra ahy. Satria mikrôfôma condenser ity, fitsapana ity, manao fitsapana fitendrena fitendry - ary any no alehanay, mety henonao fa fitsapana ny tsindry bokotra. Fitsapana fitsapana 1-2-3.BASS.
Ary farany, ity dia fitsapana manta sy voahodina mampitaha azy amin'ny Audio Technica AT2020mic - mic $ 50 ka $ 80 izay matetika no atoroko ho safidy 'budget'. OK, tsindrio eto, apetrako ao anaty booth misy feo ilay feo dia mitoka-monina tokoa ny fomba ahazoana azy eto amin'ny studio misy ahy. Ary nampiditra ny mikrô izahay tao amin'ny Focusrite Scarlett 2i2, izay ao aoriako ary tafiditra ao amin'ny solosaina findainy, ary tena hanao fampitahana amin'ny Audio Technica AT2020 izahay.
Ka io no feon'ny BM-700 rehefa mihazakazaka amin'ny Phantom Power Focusrite Scarlett 2i2, ary averinay amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo horonantsary roa ireo, saingy mbola tsy vita aloha izany. Fitsapana izany. Fitsapana fitsapana 1-2-3.
Andao hifindra amin'ny AT2020. Ary ankehitriny manana ny Audio Technica AT2020 miaraka amina fananganana mitovy eto isika ao amin'ny Vocalbooth miaraka amin'ny Scarlett 2i2 mifandray amin'ny solosaina findainy. Fitsapana mikrô ity.
Ny AT2020 dia somary lafo kokoa ary tafiditra ao amin'ny sokajy 'microphone budget' ho ahy. Azonao atao ny mividy azy io na aiza na aiza manomboka amin'ny $ 50 ka hatramin'ny $ 100, saingy somary kely - mazava ho azy fa somary lafo kokoa noho io fanomanana io. Ary ny microphone ihany no iarahany, fa tsy ny fanamboarana mikrô manontolo.
Ary tena hanao fampitahana amin'ny Audio Technica AT2020 izahay. Ka io no feon'ny BM-700 rehefa mihazakazaka mamaky ny Focusrite Scarlett 2i2 miaraka amin'ny fikirakirana herinaratra phantom. Ary ity dia faharoa amin'ny fikarakarana.
Fitsapana izany. Fitsapana fitsapana 1-2-3. Andao hifindra amin'ny AT2020.
Saingy satria tafiditra ao amin'ny sokajy mics teti-bola izay atoroko matetika izany, dia mila fampitahana aho ary averiko indray ny santionany manta sy santionany voahitsy mba hahafahanao mampitaha ny fiarahan'izy ireo miaraka, satria ho an'ny tsara indrindra Mba hivoahana ny mic anao dia mila manampy EQ kely sy famatrarana. Raha liana amin'ny fomba hanaovana izany ianao dia manana tutorial amin'ny fantsoko aho, zahao izany. Ity dia mikraoba mahery vaika, ary raha mitady ny fananganana audio mora vidy ianao ho an'ny famoronana votoaty, azoko atao ny manolo-tena hanamarina ity kit ity - tadidio fotsiny fa mety tsy mety aminao ilay adaptatera USB, nanolo-kevitra ny hijereko ny mikrô BM-800 ary antenaiko ny hahatongavako atsy ho atsy fa toa mpifaninana mafy izany.
Izaho dia EposVox, eto mba hahatonga ny teknolojia ho azo takarina sy hahafinaritra kokoa amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fampianarana maimaim-poana ary antenaiko fa nankafizinao ity famerenana ity.
Manana rindrambaiko i Tonor?
tonormikrôrindrambaiko| Radio Online Ankehitriny.2 Mey 2018
Tongasoa eto amin'ny Tari-dalan'i Hoddy, amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny TonorBM 700 isika ary misy rohy iray amin'ilay famaritana ao amin'ny Amazon izay ahafahanao mividy ity microphone lafo vidy ity dia nesorina daholo ireo fonosana mba hahamora ny fahitana azy, mahazoa foana Ity ny bokinao mpampiasa azonao atokisana amin'ny fiteny roa samy hafa, manana mpameno pop aho, ity iray amin'ny lafiny iray ity ary mihodina fotsiny amin'ny bracket. Manana XLR ka hatramin'ny XLR aho ary jack XLR ka hatramin'ny 3.5mm, ny tompon'ny mikrô ihany ary ny reducer hahafahanao miditra ao aminy amin'ny havoana isan-karazany.
Fotoana mety hijerena ny manodidina mba hahazoana antoka fa eo ny loharano dia tsy mampiasa roa tonta aho ary miaraka amin'ity kara-peo ity dia tsy manana fanantenana firy aho, fa maimaim-poana Izany no latabatrao. manana morony moramora amin'ny lafiny iray mba hiarovana ny mikrôfôsy itselfa condenser mikrô dia ho hitanao fa aiza ny teny tonor no tianao hiresahana amin'ny mikrô ary misy XLR eo ambany sy amin'ny brom arm dia izao dia ahitsy ianao fa i Desk no miakatra amin'ny manindrona ireo faritra roa ireo ny tendrombohitra mba hisokafan'ny microphone ary mazava ho azy fa te hanondro izany ianao na aiza na aiza no hitenenanao dia afaka manova ianao, mamindra izany amin'ny fotoana rehetra, manaraka dia azontsika ampiana ilay mpameno pop ny iray amin'ireo azo ampiasaina na koa. Ho an'ity dia mifamatotra tsotra izao amin'ny teboka rehetra amin'ny sandry, izay tadiavinao tsotra izao, dia mety ho manify kely. Mety mila milalao miaraka aminy kely ianao mba hahazoana azy amin'ny toerana tsara.
Ie, tadiavinao eo anelanelanao sy ny mikrô izany ary mijanona ny tabataba rehefa miteny ny p'sasanao amin'ny fanadiovana tariby ianao matetika dia mampiasa Velcro kely aho hampifandraisiko amin'ilay famaritana izay tena mora raisina amin'ny telegrama rehetra milamina tsara lavitra noho ny fatoran'ny zip satria afaka mamaha izay ilaina fotsiny ianao. Manana fanamafisam-peo Phantom 48V aho izay azonao ampidirina amin'ny fampiasana an'ity tariby ity fa tsy manana aho ka tsy hampiasa azy anio aho fa ity ny tariby XLR Ity no jack 3.5mm sy karatra USB Sound tafiditra ao.
inona ny audioendpointbuilder
Hanao fitsapana vitsivitsy miaraka aminy aho avy eo, saingy miditra amin'ny seranana mavo fotsiny izy ary avy eo dia apetaho fotsiny toy ny mahazatra, ka ity no fanamboarako farany satria hitanao fa manana popp aho ary tena nasiako zoro izany ny mikrô ao amin'ny solosainako satria io no pa mitabataba ao amin'ny biraoko ary amin'ny alalàn'ny feon'ilay mikrô dia tsy hisintona zavatra avy any aoriana ianao na kely kokoa ka ho takona amin'ny solo-sainako ireo mpankafy sy ny zava-drehetra ary tokony haka ilay tabataba amiko fotsiny alohan'izay. Eto aho manandramana ny BM700 miaraka amina kara-pifandraisana misy ao amin'ny USB, satria hitanao fa navadiko araka izay azo atao ny tombony rehetra. Ankehitriny dia mizaha toetra ny BM 700 aho, izay mampifandray mivantana amin'ny motherboard ahy dia tafiditra ao ny solosaina. Reko fa mafy kokoa io, mbola navoakako ny tombom-barotra nefa mbola tsy mampiasa amplifier 48 volt phantom aho mba henonao k In mba hahafahanao mampiasa azy io, mazàna aho mila mametaka kely ny tombony amin'ny firaketana an-tsoratra mba tsy hitrangany ity mety ho tsara indrindra ho anao raha mandeha ankolaka ianao, fa azon'ny olona atao ny mamadika kely ny feony, tsy izany olana iray koa hampavitrika ny feoko RTX raha mbola tsy nahita ny lahatsoratray ianao talohan'ny nanampiako rohy tao amin'ilay famaritana sy eo an-tampon'ny efijery d araka ny ahitanao azy, raha mijanona segondra aho dia jereo izahay eto milomano eny ambany rihana izay ny latabatrao tabataba fa izao raha mifindra amin'ny RTX fotsiny aho manapaka ny gorodon'ny tabataba ary feo malefaka kokoa izany, manandrana manala ny tabataba any aoriana, mety avy amin'ireo mpankafy ny solosainako na zavatra hafa, eny tena azo ampiasaina Microphone iray raha tariby mivantana amin'ny motherboard ianao, raha liana amina sehatra hafa ananako ianao eto, mankanesa any amin'ny sivana.
Azonao atao ny mahita an'io mazava ho azy fa ny fametrahana napetrako avo dia avo satria tsy mampiasa phantom isika. Manana fanafoanana ny tabataba ambany aho. Mampiasa RTX koa aho izay manao ny ankamaroan'ny asa ary nampidina an'ity plugin ity koa aho ary manana fiolahana kely miaraka amiko fa ho an'ny feoko ihany io.
Mety ho hitanao fa raha ny feonao dia Tonie rehetra dia azonao atao ny manangana na mampidina ny fotony, saingy manana feo lalina aho dia mety hampihena ny basiko ihany koa, eny ary noho izany dia nivoaka ity, antenaiko fa nankafizinao izany V ideo izany mety hanao lahatsoratra hafa atsy ho atsy momba ny fantsona audio sy ny zavatra toa ny OBS sy ny mahazatra ato ho ato. Antenaina fa hanao famerenana bebe kokoa isika, angamba amin'ny Phantom 48 volts. eny ka aza adino ny tia sy misoratra anarana ary ampahafantaro anay amin'ny hevitra fa nahita ny mikrô ianao ary eny ny fomba fifandraisanao aminy
Ohatrinona ny rakitra mpamily mikrô tonor?
TONOR MICROPHONE DRIVER INFO: Type: Driver File Name: tonor_microphone_9558.zip File Size: 5.4 MB Rating: 4.91 (318) Downloads: 291 andalana 3 hafa ...
Inona no ataon'ny microphone condenser tonor tc30 USB?
TONOR TC30 USB Condenser Microphone dia manana lamina fakana kardioid ary fiasa fanakanana ivelan'ny axis tena tsara, ahafahany mamoaka feo voajanahary bebe kokoa ary manafoana ny tabataba tsy takiana. Miaraka amin'ny seranan-tsambo USB 2.0, tsy mila rindrambaiko mpamily fanampiny na fitaovana ivelany ilaina.
Mila mpamily ho an'ny mikrô tonor Q9 ve ianao?
Workstation, io, natolotra mba hatoriana. Plug and Play, Miaraka amin'ny tariby USB A ka B, mikrô TONOR Q9 dia mora ny mifandray amin'ny solosaina Mac sy Windows, tsy mila rindrambaiko mpamily na karatra feo intsony. Miala tsiny aho fa somary tara vao omaly, ary mila miasa amin'ny andro faran'ny herinandro aho ka voatery natory.
Aiza no ahafahako mividy mikrô tonon-tsarimihetsika?
Mividiana TONOR PC Microphone USB Computer Condenser Gaming Mic Plug & amp; Milalaova miaraka amin'ny Tripod Stand & amp; Sivana pop ho an'ny firaketana feo, Podcasting, streaming ho an'ny Computer Laptop Desktop Windows Laptop iMac ao amin'ny Amazon UK. Tonor Pro Condenser Microphone, na efa nanao izany ianao.